Date My Pet » 5 Kudanana Taboos Zvaunofanira Kurambana kutiza
Sei munhu anofanira Musanyura pasi zvokufambidzana taboos? Kazhinji taboos ava kurega vanhu kuuya mhiri munhu kodzero panguva yakakodzera; pamwe zvakawedzera zvazvingava yakatsemurwa nemateru kurambana dzakadaro, ichi inongova chisingaregererwi. saka, chaunotanga kuita asati kubuda musi ari kutyora taboos izvi. Heano mamwe kudanana taboos unofanira kubvisa.
1 Oh! Kuti murume anotarira zvakanaka, asi rakapfupika zvikuru kupfuura ini.
Chii kureba? ukama seiko zvakaipa nokuti munhu ari mupfupi kupfuura mukadzi? Pane pokutarira pamusoro chomunhu nokukwirira, unofanira kunyatsoteerera utano hwake, munhu, dzidzo uye zvaiti. Chokwadi unogona kuenda zvimwe asingafungi unhu hwakafanana runako uye simba (hungu avo misikanzwa nguva), asi kuita zvisarudzo munhu nokukwirira haisi zviripo.
2 Ini havambofaniri kuva munhu kutanga.
Uyu ndomumwe kufambidzana kunorambidzwa zvinokonzera kunyange vamwe akaisvochenjera uye coolest vakadzi. kunorambidzwa ichi chaizvoizvo runobva Manyepo kuti zvinoratidza vakadzi vanosarudza kufambidzana nechivimbo, Varume vakasimba vane go-getters uye varume vari kunyengerwa nyore vakadzi vanoita vanzwe simba, nechivimbo uye uende-kuwana. Izvi ndizvo chaizvo marara.
Zviri hazvisizvo kufunga kuti vanhu vose zvakafanana. Kune vazhinji, uye hongu vakawanda nokuda kwazvo kutya kurambwa haana kubvunza vakadzi kunze; vakadzi nguva dzose anofanira kutora rokutanga kutanga ngadzinyorwe dzichashandura kuvakumbira panze kana pabonde. ichi, zvisinei, hamungambozvinzwisisi Inosimbisa chokwadi kuti vanhu vakadaro vanogona kuva upenyu zvikuru ishamwari kana (kana musiri kutarira kuti kure) kufambidzana mates.
3 Ari kumbondiudza kuti akatsemura bhiri; anofanira kuremekedza chaiyo vakadzi.
Hatingadaro; kunze kupotsa mukana showcase ake ane hanya kuzvida, kuburikidza kuda akatsemura bhiri varume anoguma kuratidza kubatana chaiko kuoma musoro. Garai kure varume vakadaro.
4 Rinongova zuva redu rokutanga; sei Ndinogona kuita zvepabonde?
Women kunetswa ne yakaipisisa kufambidzana kunorambidzwa vanofunga kuti varume hakumbofi kuremekedza vakadzi vawane dzapedyo usiku wokutanga chaizvo uye nokudaro haana kuwira murudo navo.
Vakadzi ivavo vanofanira kuyeuka kuti ukama huru kazhinji anenge ane sesasaradzi pakarepo kana kemisitiri. Just nokuti pabonde musi wokutanga, murege kuva nyore. Sex musi wokutanga-musi vangangodaro kuva chokukomborerwa chokuti iwe itsva kufambidzana naye vari gelling chaizvoizvo zvakanaka pamwe chete.
5 Kuti mukomana akanaka vanonyengera, asi iye bhururu wangu.
The kunorambidzwa rinoti uchidanana ukama pakati navo kazhinji vane pfupi-akararama nokuda zvinhu zvakafanana negodo, kukanganisika, kusarura uye guhwa. Vakawanda kuzeza ukama dzakadai vanotya kuti kurambana kuti kuita upenyu kubasa zvachose urombo kwavari.
Rasa kunorambidzwa ichi nekukurumidza sezvo ungaona akakwana upenyu naye kwenyu naye. Chinhu chakanakisa pamusoro ukama zvakadaro ndechokuti vaviri uchawana kupedza nguva yakawanda pamwe chete; unogona kufamba pamwechete uye kubva kubasa, unogona kuva yako zvemasikati pamwe chete, tora chikamu muhofisi zvokukurumidza kuva pamwechete uye zvichingodaro. Just nechokwadi chokuti musiyano kwako pachako (kana paine) regai kuchinja basa.
Usamborega taboos izvi kuridza mabasa makuru pakusarudza munhu. Kuita izvozvo kuchaita chete kuti iwe mira zvakawanda mweya wako.